Yusuf-kii kale... Taxanaha 89 iyo 90 - Qaybta Lix iyo Tobnaad - Caasimada Online
Home Warar Yusuf-kii kale… Taxanaha 89 iyo 90 – Qaybta Lix iyo Tobnaad
Yusuf-kii kale… Taxanaha 89 iyo 90 – Qaybta Lix iyo Tobnaad
Qaybtan waxaan ku soo qaadanayaa arrin aniga ila soo gudboonaatay laakiin aan khuseyn dhacdooyinkii woqooyiga. Waa ninkeed-guba’ aniga i saameysay, sawrika guud ee nolosheydii berigaasna in yar ka tilmaameysa.
Sidoo kale waxaan wargeliyay dhammaan Xafiisyada aan ka shaqeeyo – Radio Muqdisho, ICRC iyo Xarunta Dhaqanka Faransiiska. Saaxiibbadeey iyagana waan la socodsiiyay arrinta.
Maalintii iigu darnayd, gabar dhallinyar oo will yari uu la socdo ayaa timid Radio Muqdisho. Waa gabar aniga i goobeysa. Markii la ii keenayna waxay aniga, weriyayaal aan wada taagnayn Xafiiska Wararka oo aan ka tirsanaa hortiisa iyo ninkii oo keenayba ay cod hoose nagu weydiisay – Yusuf-Garaad kale ma jiraa oo Radio Muqdisho ka shaqeeya? Waxaan ku niri maya. Iyada oo xishooneysa, isla markaana jahawareersan ayay igu tiri abbow iska raalli ahow, wayna naga dhaqqday.
Sheeko dheer oo aan eray kasta oo macluumaad xambaarsan aan dirqi iyo dulqaad uga soo saaray ka dib waxaan fahmay in ninka ay raadineysaa uu yahay nin Radio Muqdisho yaqaan. Sababta oo ah wuxuu u tilmaamay oo ay si sax ah iigu sheegtay qaabka uu u dhisan yahay studio-ga warka laga tebiyo. Waxay tilmaan fiican iga siisay sida uu ninku u eg yahay.
Dhowr nin oo dadka weriyayaasha aad u jecel ah, qaar ay yihiin weriyayaal-iska-yeel, kuwo aanan shaqsiyaddooda ku kalsooneyn oo ka shaqeeya saxaafadda laakiin aan magac weyn ku lahayn ayaan qaar ka shakiyay. Aniga oo gabadha kaashanaya oo ay dusha iga eegeyso ayaan nimankii midba meel kula kulmay – Radio Muqdisho, Tiyaatarka, Xarunta Ururka Dhallinyarada iyo goobo kale. Midkoodna wuu noqon waayay ninkii aan goobayay ee “sammigey” ahaa.
Sannad iyo ku dhowaad laba markii aan baadi-goob ku jiray, ayaa maalin aniga oo jooga Berbera waxaa ii soo dhacday farriin iigu timid teleprinter oo ah aalad isgaarsiineed oo ka horreysay Fakis, kana duwan Telekis.